संक्रमितको रूखमुनि बास – Dainiki Online
30/04/2021 30/04/2021 adminLeaveaComment on संक्रमितको रूखमुनि बास
विराटनगर — अछामको ढुङ्गीचेला घर भएका शेरबहादुर कामी बिहीबार बिहान भारतको झारखण्डबाट चार छोराछोरी र पत्नीसहित जोगबनीको रानी नाका आइपुगे । नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरू सबैको एन्टिजेन परीक्षण गराए ।परीक्षणमा चार छोराछोरी र शेरबहादुरको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । उनकी पत्नी जीवनाको रिपोर्ट भने पोजिटिभ आयो । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले विराटनगर महानगरपालिकाको सूचना शाखामा फोन गरे । त्यहाँका कर्मचारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फोन गर्न आग्रह गरे ।
‘मन्त्रालयले कोभिड १९ अस्पतालमा फोन गर्नुपर्ने बतायो । कोभिड अस्पतालले संक्रमित सिकिस्त भए मात्र भर्ना लिने र सामान्यलाई नलिने जवाफ दियो,’ सीमामा खटिएका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि हेल्थ डेस्क नजिकको पीपलको रूखमुनि डोरीको घेराबन्दी गरेर उनलाई तातो घाममा दिनभरि राख्न बाध्य भयौं ।’ उनले जीवनालाई आइसोलेसनमा पठाउन पहल भइरहेको बताए ।तीन वर्षदेखि झारखण्डको देउघाटमा मजदुरी गरेर घर फर्केका शेरबहादुर र उनको परिवार दुई दिनको यात्रापछि बिहीबार बिहान रेलमार्ग हुँदै जोगवनी आइपुगेको हो । ‘अब परिवारलाई लिएर घर कसरी पुग्ने ! गोजीमा जम्मा पाँच सय रुपैयाँ छ ।’ बिहानको खाना पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले खुवाएको उनले सुनाए । उनले श्रीमतीलाई संक्रमण देखिएपछि बालबच्चालाई संक्रमणबाट जोगाउन गाह्रो भइरहेको बताए । चारै बालबच्चा संक्रमित आमासँगै टाँसिइरहेका थिए । शेरबहादुर भने बिहीबार दिनभरि अछाममा रहेका आफन्तलाई फोन गर्न व्यस्त थिए ।
बिहीबार नै नाकामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा भारतका विभिन्न स्थानबाट घर फर्किएका विराटनगर १२ का चार जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । उनीहरूलाई वडाध्यक्षको रोहवरमा होमआइसोलेसनमा पठाइएको सीमा हेल्थ डेस्कका प्रमुख डा. कमलकिशोर यादवले बताए । सुर्खेतका विनोद नेपाली परिवारसहित चार जना बिहारबाट तीन दिनअघि जोगवनी नाका हुँदै घर फर्किने क्रममा उनको एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । त्यतिबेला पनि यहाँका कुनै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारी लिएनन् । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले खानाको व्यवस्था गरेर रातभरि पीपलको रूखमुनि राखेर भोलिपल्ट आफन्तको जिम्मा लगाएको ती सुरक्षा अधिकारीले बताए ।छोटी र गल्ली नाकामा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेपछि तीन दिनयता रानी नाका हुँदै घर फर्कने नेपालीको भीड बढ्दो छ ।
तीन दिनदेखि दिनमा सरदर डेढ सय जना नाकाबाट भित्रिरहेका छन् । हेल्थ डेस्क प्रमुख डा. यादवले तीन दिनयता २० जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको बताए । तीमध्ये १८ जना विराटनगर र आसपासका भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बोलाएर जिम्मा लगाइएको छ । मोरङ बाहिरका संक्रमितलाई घर पठाउन समस्या हुँदै आएको डा. यादवले बताए ।जिम्मेवार निकायले व्यवस्थापन नगर्दा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको यादवको गुनासो थियो । उनका अनुसार सुर्खेत घर भएका संक्रमित बेखर्ची रहेकाले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले गोजीबाट रकम निकालेर घर जाने व्यवस्था मिलाइएको थियो । डा. यादवले एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेलाई १० दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिदै पठाउने गरेको बताए ।